(शहिद स्मारक ए-डिभिजन लिग बाट पठाईएको)
सहिद स्मारक ए-डिभिजन लिग (पहिला काठमाडौं लिग च्याम्पियनसिप) नेपालको सर्वाधिक ठूलो र स्तरीय फुटबल लिग हो र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको शीर्ष बिभाजन मध्य एक हो जुन प्रत्येक वर्षमा नेपालको उत्कृष्ट फुटबल क्लबहरू बिच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन हुने गर्दछ। जसको स्थापना वि.स.२०११ सालमा भएको थियो भने यस लिगका सस्थापकका रूपमा नरशमशेर ज.ब.रालाई लिइन्छ। यस लिगमा जम्मा टिमको सङ्ख्या १२-१६ सम्म हुने गर्दछ। यो सहिद स्मारक बि-डिभिजन लिग भित्र प्रमोसन (पदोन्नति) र रेलिगेसन प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरेको छ। एक सिजनमा टोलीहरू एक पटक प्रत्येक टोलीसँग भिड्ने गर्दछन्। यो सामान्यतया मङ्सिर देखि माघसम्म हुने गरेको छ। यसका शीर्ष ६ टिमहरू सुपर ६ राउन्डमा पुग्छन्, जहाँ टोलीहरू फेरि एक-अर्कासँग भिड्छन्। यो हाल बजाज पल्सरद्वारा प्रायोजित गरिएको छ र यसको आधिकारिक रूपमा पल्सर सहिद स्मारक ए-डिभिजन लिगको रूपमा चिनिन्छ।
सहिद स्मारक ए-डिभिजन लिगको २०७५ सालको संस्करण यसको ४१ अौँ संस्करण हो। यसमा १४ शीर्ष बिभाजित टोलीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। सन् २०१३-१४ (२०७०)को संस्करण भने ३० डिसेम्बर २०१३ बाट सुरु गरिएको थियो।
कुनै पनि देशको फुटबलको स्तर माथि उकास्न वा फुटबलको विकास गर्न त्यो देशमा हुने फुटबल लिगले महत्त्वपूर्ण र ठूलो भूमिका खेल्दछ।लिगले व्यावसायिक खेलाडीहरू पनि जन्माउने हुनाले स्वयम् फुटबल खेलाडीहरूलाई पनि लिग आफैंमा एक आवश्यक तत्व हो ।साँच्चै भन्ने हो भने कुनै देशको फुटबल विकासको मेरूदण्ड नै फुटबल लिग हो ।नेपालमा फुटबलको जग बसाउन र फुटबलको विकासका निम्ति भनेर लिग फुटबलको अवधारणा ल्याउने पहिलो व्यक्ति नरशमशेर ज.ब.रा. थिए।जतिखेर उनले नेपालमा फुटबलको आवश्यकता ठाने त्यतिबेला वा वि.स.२००७ साल तिर उनले भारतीय मोहम्दन स्पोर्टिङ क्लबबाट व्यवसायीक फुटबल खेल्दथे।अनौपचारिक रूपमा नेपाल फुटबल संघको स्थापना वि.स.२००४ सालमै भइसकेको थियो र त्यसका हर्ताकर्ता पनि ज.ब.रा.नै थिए।तर उनको अवधारणा मूर्तरूप लिन भने सात वर्ष पर्खनु परेको थियो ।अर्थात् वि.स. २०११ सालबाट नेपालमा लिग फुटबलको सुरूवाट भयो ।जति बेला सम्म राणा, दरबार हुदै नेपालमा फुटबल खेल केही हदसम्म जनताहरूमा समेत पुगेको थियो।लिगको इतिहास पल्टाउँदा नेपाली फुटबललाई मुख्यत दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिएको छ। २०४६ सालसम्म पहिलो काल र त्यसयता अर्को। २०४६ पछिको लिग आधुनिक लिगमा परिभाषित हुँदै गएको छ।
सुरूवाती अवस्था[सम्पादन गर्ने]
नेपाली फुटबलको सुरुआती इतिहास राजपरिवार सदस्य र राणा खानदानको सेरोफेरोमा छ। केही स्थानीय टोलीका युवाहरू हुनेखाने राजपरिवार र राणाहरूसँग रमाइलोका लागि फुटबल खेल्थे। यिनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा काठमाडौंको टुँडिखेल भरिन्थ्यो। विक्रम सम्वत २००० सालपछि व्यवस्थित फुटबल हुन थाल्यो। खेलाडी र दर्शक बढ्न थाले। यसले नै लिग फुटबलको बाटो देखायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेरले काठमाडौं उपत्यकामा त्यसबेला चलेको फुटबल लहरलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न २००४ सालमा रामजानकी कप फुटबल प्रतियोगिता गराए। २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि पुलिस फोर्सले लगातार तीन वर्ष उपाधि जित्दै कप पचायो। भएको एउटै व्यवस्थित कप पच भएपछि पुलिस फोर्सले यो वास्तविकतालाई बुझेर प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन सहिदको संस्मरणार्थ एउटा ट्रफी तत्कालीन नेपाल फुटबल संघलाई दियो, जुन आजसम्म सहिद स्मारक नामले चलिरहेको छ।
रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) ले २०२८, २०२९ र २०३० मा गरी लगातार तीनपटक लिग जितेर फेरि शिल्ड पच गर्यो। २०३० मा अखिल नेपाल फुटबल संघ गठन भएपछि यो प्रतियोगिता नयाँ जोश र स्वरुपसहित अगाडि बढ्यो। तत्कालीन अवस्थामा यसले फुटबलको संरचना संस्थापन गर्न ठूलो मद्दत गर्यो। विकेन्द्रीकरणको सवालमा भने लिग शून्यजस्तै थियो, जुन अहिले पनि त्यस्तै छ। नेपालजस्तो खुला बजार नभएको ठाउँमा ४० वर्षअघि बजार प्रवर्द्धनको कुनै सम्भावना थिएन होला। अहिले पनि व्यावसायिक पाटोको हिसाबमा यसको खासै महत्व दिइएको छैन, जसले नेपाली फुटबललाई प्रत्येक वर्ष पछाडि धकेलिरहेको छ।
२०४६ अघिका लिगका तथ्यांकहरू स्पष्ट छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को वार्षिक प्रकाशन 'नेपालमा खेलकुद' २०३९ संस्करणअनुसार सो वर्ष लिग यस प्रकारले भएको थियो– सहभागी ११ टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन खेलाइँदा त्यसबाट २–२ टोली सुपर लिग पुगेका थिए। जसमा अन्नपूर्ण फुटबल क्लब ५, जावलाखेल युथ क्लब ४ र आरसीटि क्लब ३ अंक जोडेर क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका थिए।
'महावीर र एनआरटीको खेलमा फुटबलमात्र होइन, बक्सिङ,कुस्ती पनि हेर्न पाइन्छ भन्थे दर्शक। यिनीहरूको खेल भनेपछि काठमाडौं दुई चिरा परेजस्तो हुन्थ्यो,' पाण्डे विगत सम्झन्छन्, 'ज्वरो आएका कारण एकपटक खेल्न जान सकिनँ। औषधी लिन बाहिर निस्किएको एउटै पसल खुलेको थिएन। डिल्लीबजार पूरै सुनसान थियो। घर घरमा पारिवारिक झगडा नै हुन्थ्यो, को फुटबल हेर्न जाने भनेर। अहिलेको रंगशाला भए पनि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा त्यतिखेर केही थिएन। खालि मैदानमात्र। खेलाडी सिधा सम्पर्कमा हुन्थे दर्शक। त्यही भएर पनि हो कि क्या हो, त्यस्ता दर्शक अहिले देखिँदैन।' २०४३ सालको 'दी राइजिङ नेपाल' मा सुशील शर्माले लेखेका छन्, 'मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सुपर लिगको अन्तिम खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरी लिग उपाधि जितेको छ।' यसले लिग अर्को फरक संरचनामा पनि भएको देखाउँछ। शर्मा पनि प्रजातन्त्रअघि लिगमा दर्शकको चासो र प्रत्येकजसो खेलमा हुने झगडालाई स्मरण गर्छन्। 'त्यतिखेर हामीलाई नेपालको लिगमात्र जानकारी थियो, बढीमा भारतको लिगमा मोहन बगान, इस्ट बङ्गाल, साल्गावकर कुन स्थानमा छ भन्ने चासो हुन्थ्यो,' शर्माले भन्छन्, 'अहिले स्पेनिस,इपिएलदेखि सबै लिग थाहा पाउनुपरेको छ। तत्कालीन लिगको विशेषता नै दुई टोली र तिनका समर्थकबीच हुने झगडा थियो, रेफ्रीचाहिँ पिट्दैनथे।'
आधुनिक लिग[सम्पादन गर्ने]
२०४६ सालयता लिग निरन्तर हुन सकेन। प्रजातन्त्रपछिको २४ वर्षमा केवल ११ पटक लिग भए। २०५२ मा आएर पहिलो लिग भयो। त्यसपछि पनि आर्थिक कठिनाइ, सरकारी हस्तक्षेप र फुटबलको आन्तारिक विवादका कारण लिग नियमित हुन सकेन। हुँदा पनि एकरुपको भएन। ११ लिग ७ फरक संरचनामा आयोजना भए।
२०५७ र २०६० पनि सिंगल लिगमै भए। प्रजातन्त्रपछि २०५४, २०५७ र २०६० मा गरी सिंगल लिगमा हुनु एकै संरचनामा सबैभन्दा धैरेपटक थियो। नेपाल पुलिस क्लब (तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब) २०६० बाट लिगमा पुनः फर्कियो। त्यसको अर्को २ वर्ष क्रमशः विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपिएफ क्लब पनि लिगमा आए। २०६१ मा सुपर सिक्स अवधारणामा खेलाइयो। सिंगल लिगपछि शीर्ष ६ टोली सुपर सिक्समा खेल्ने, पहिलो चरणको अंक लिएर। थ्री स्टार क्लब, नेपाल पुलिस क्लब,मनाङ- मर्स्याङ्दी क्लब,नेपाल आर्मी क्लब,फ्रेन्ड्स क्लब र जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष ६ स्थानमा रहे।लिग च्याम्पियन बन्दै थ्री स्टार क्लब एएफसी प्रेसिडेन्ट कपमा सहभागिता जनायो। एन्फाले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को आदेश भन्दै २०६२ र २०६३ डबल लिग अनिवार्य बनायो। त्यसपछि ४ वर्ष लिग हुन सकेन। खेलकुद परिषदको हस्तक्षेप, केही क्लबको विद्रोह लिग नहुनुको एउटा कारण थियो। डबल लिग धान्न नसकेका कारण क्लब विद्रोहमा लाग्नु अर्को कारण थियो। खेलकुद परिषदले उचालेको नेपाल फुटबल संघ र एन्फा एक भएपछि २०६६–६७ मा लिग फेरी सुरु भयो। संरचना भने डबल लिग नै थियो। समयभावका कारण एनआरटी क्लब पहिलो चरणको विजेताका आधारमा एएफसी प्रेसिडेन्ट कपमा छानियो।
नेपाल फुटबल संघ र एन्फाले फरक रुपमा आयोजना गरेको बी डिभिजनमा ४–४ टोली बढुवा भएपछि २०६७ मा १८ टोलीले सहभागिता जनाए। २०६८ मा राष्ट्रिय लिगले केही आशा देखायो। पहिलो चरणका शीर्ष ६ टोली र मोफसलको क्षेत्रीय लिगका विजेता पोखराको संगम फुटबल क्लब र उपविजेता धरानको मित्रमिलन क्लबले सहभागिता जनाए। प्रजातन्त्रपछि नै दुई पटक राष्ट्रिय लिग भएका थिए। २०६८ को राष्ट्रिय लिगले यस अघिका राष्ट्रिय लिग जस्तै निरन्तरता पाउन सकेन्। २०६९ र २०७० को लिग फेरी सुपर सिक्स संरचनामा आइपुगेको छ। अर्को पटकको संरचना कस्तो हुने हो निर्क्यौल भएको छैन्।
पहिलो दोहोरो लिगको सफलता[सम्पादन गर्ने]
वि.स. २०६२ सालको राष्ट्रिय लिग देखि यो ए-डिभिजन राष्ट्रिय लिगमा पनि दोहोरो लिग वा डबल लिगको सुरूवाट गरिएको थियो। यस पहिलो डबल लिगको उपाधि मनाङ- मर्स्याङ्दी क्लबले जितेको थियो। पहिलो लिगमा पाचौं स्थानमा रहेको मनाङले दोस्रो लिगमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै उपाधि जितेको थियो। यस्तै पहिलो लिगमा रेलिगेसनमा परेको ब्वाइज युनियन क्लबले पनि दोस्रो लिगमा रेलिगेसनबाट बाचेको थियो। पहिलो राष्ट्रिय लिगका बारेमा तत्कालीन आरसीटि क्लबका प्रशिक्षक वैजु कपालीले "दोहोरो लिग आवश्यक छ,स्वीकार्छौ" भन्ने भाव व्यक्त गरेका थिए।
अहिलेको सहिद स्मारक ट्रफी भने नयाँ ट्रफी हो ।जुन अखिल नेपाल फुटबल संघले प्रदान गर्ने गर्दछ।
ट्रफि भ्रमण[सम्पादन गर्ने]
शहिद स्मारक ए-डिभिजन लिग २०७५ अगाडी एन्फाले ट्रफि टुर गरेको थियो । जुन असोज १ गतेबाट सुरू भएको थियो । असोज १३ देखि सुरु हुँने सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको पुर्वसन्ध्यामा सुरु भएको ट्रफी टुर पहिलो दिन त्रिपूरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा राखिएको थियो । लिग ट्रफीलाई काठमाडौं उपत्यकाको सात स्थानमा भ्रमण गराइने एन्फाले जनाएको छ ।`स्कोर अ गोल’ नाम दिइएको ट्रफी टूरमा नेपालका अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलाडी, प्रशिक्षक र सेलिब्रेटीहरुको समेत उपस्थिती भएका थिए। यो टूर काठमाडौंका पाँच विद्यालय तथा ललितपुर र भक्तपुरको एक–एक स्थानमा संचालन भएको थियो ।
९ 1१९६७-६८ २०२४ फ्रेन्डस् क्लब
उत्कृष्ट क्लब नतिजा[सम्पादन गर्ने]
फ्रेन्डस् क्लब २०२४ साल
२०७५ सालको संस्करण[सम्पादन गर्ने]
फ्रेन्डस् क्लब ८ अौँ
एएफसी प्रतियोगिताहरूमा ए-डिभिजन लिगका क्लबहरूको प्रदर्शनी[सम्पादन गर्ने]
एएफसी प्रेसिडेन्ट कप[सम्पादन गर्ने]
एएफसी कप[सम्पादन गर्ने]
एसिया क्लब च्याम्पियनसिप[सम्पादन गर्ने]
राजर्षी जनक कप
रूपक स्मृति कप
सहारा सुरूङ्गा गोल्डकप
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सहिद_स्मारक_ए-डिभिजन_लिग&oldid=773040" बाट अनुप्रेषित
एएफसी राष्ट्रहरूका राष्ट्रिय पुरूष फुटबल लिग
राष्ट्रिय पुरूष फुटबल लिग
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:००, १० मार्च २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।